बुद्ध मावली देवदहमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय डीन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । शुक्रबार स्कुल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज एण्ड एप्लाइड साइन्सको डीन कार्यालय देवदहमा खुलेको हो ।
सरकारले विश्वविद्यालयका लागि देवदहमा करिब ९० विगाहा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोही जग्गामा पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत थालनी प्रक्रियामा पुगेको छ । देवदहमा विश्वविद्यालयले नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार बिहान एक कार्यक्रमकाबीच डीन कार्यालयको उद्घाटन र नयाँ पूर्वाधार निर्माण स्थलको अवलोकन गरेका छन् ।
सो अवसरमा बोल्दै पौडेलले बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरमा चिनिने बनाउनुपर्ने बताए । ‘बौद्ध क्षेत्र, शिक्षामा अनुसन्धानसहित बहुविषयमा यसलाई विश्वस्तरमा चिनिने विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ, उनले भने । विश्वविद्यालको विकासका लागि सरकारले लगानी गर्ने उनले विश्वास दिलाए ।
सो अवसरमा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सांसद छबिलाल विश्वकर्माले निकै मेहनतले देवदहमा विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्ती गरेको भन्दै अब यसको पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘यो हजारौँ विद्यार्थीले भरिएको विश्वविद्यालय बन्नेछ, त्यसका लागि अहिलेदेखि नै दीर्घकालका लागि महत्व राख्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ,' उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले बौद्ध विश्वविद्यालयले देवदहको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरे । सो अवसरमा प्रदेश सांसद कृष्ण न्यौपाने, देवदह नगर उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ, कांग्रेसका नेता बासु रिमालले बोल्दै बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वाधार छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रबाट देवदहमा तीनवटा विषयको पठनपाठन गरेको उपकुलपति डा. हृदयरत्न बज्राचार्यले जानकारी दिए । एग्रो फोरेष्ट्र, इन्भाइरन्मेन्ट र डेभलपमेन्ट स्टडिजका स्नातकोत्तर कक्षा देवदहमा सुरु भएका हुन् ।
पछिल्लो विश्वविद्यालय सभाले डीन कार्यालयसहितको आंगिक क्याम्पस बुटवलमा खोल्ने निर्णय गरेको र त्यसको पूर्वाधार नयाँगाउँमा बन्ने विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यले जानकारी दिए । ‘लुम्बिनी, तिलौराकोट र देवदहसहितका बौद्ध स्थलमा बुद्ध दर्शनका पठनपाठन गर्ने योजना बनाएका छौँ, अब यसले छिट्टै मूर्त रूप पाउनेछ,' उनले भने ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २१, २०७७, १६:३६:१६